Hooyo soomaaliyeed oo lugu eedeeyey jirdil ay carruurteeda u geeysatay oo xabsi loo taxaabay | Somaliska
Denmark / Nolosha
Maxkamad ku taala magaaladda Koobanheegan ee dalka Denmark, ayaa waxeey xabsi saddex bilood ah ku xukuntay hooyo soomaaliyeed oo dalkaasi degan, ka dib markii lugu edeeyey ah ineey jir dil u geeysatay afar carruur ah oo ay dhashay horeyna looga qaatay.
Dacwad oogeyaasha ayaa maxkamada ka codsaday in hooyadaasi laga musaafuriyo dalka marka uu dhamaado xabsideeda, sababo ay ku sheegeen ineeysan heeysan dhalashada dalkaasi.Hase ahaate maxkamadda ayaa arrintaas diiday. Hooyadan soomaaliyeed ee lugu heeysto ineey carruurteeda dishay, ayaa iska fogeeysay dhammaan eedaha loo heeysto. Maxkamadda ayaa sheegtay in labbo gabdhood oo ka mid carruuraha ay dhashay korkooda laga helay nabaro jir dil muujinaya. Halka wax jir dil ah aan korkooda ka muuqan wiisha ay dhashay oo iyagana labbo ah. Waxaa maxkamada la horkeenay cadeymo ka socdo dhakhaatiir baaritaan ku sameeyay caruurta. Waxaana ay maxkamadu sheegtay in jirka labo gabdhahood ay hooyadan dhashay, ay ka muuqdaan nabaro tilmaamaya jirdil.
Sidoo kale maxkamada ayaa hooyadan ku weyday danbiga lagu soo oogay qeyb kamid ah, kaas oo ah inay jirdil u geysatay labo wiil oo ay dhashay. Bishii juunyo ee sanadkii ina dhaafay ayaa hooyadan laga qaatay carruuraha ay dhashay, ka dib markii la sheegay ineey jir dil iyo gaarac ay ku sameeyn jirtay carruurtaas. Lama oga sida xaalka hooyadan noqon doono kolka ay soo dhameeysato xabsiga saddexda bilood ah ee lugu xukumay.
Muxuu dadka reer Iswiidhan uga dhigan yahay u dabaal-daga maalinta“Fettisdagen”?
Su aal huuno abihii dhalay mee caruurta calowla xumo waynaa